Ampidiro ny fanaingoana ny router Cisco DPC2425 | Avy amin'ny Linux
@Jlcmux | | GNU / Linux, About us, Tambajotra / seriver
Tamin'ny fotoana niresahako farany momba ny Router ahy dia naharay mailaka marobe aho ary tao amin'ny Twitter koa olona maro no nanontany ahy hoe nanao ahoana ny fomba hidirako an'ity fanaingoana ity, ary azoko izany satria naharitra elaela aho ary nisy fangatahana maro tao amin'ny Google.
Efa nanampy ny sasany tamin'izy ireo tamin'ny mail aho, fa anio kosa dia hanome anao ny vahaolana mandeha amin'ny dingana maro aho.
1) Ny fototra: Rehefa mangataka fanamarinana ny Router dia avelao ho foana ny solonanarana sy ny teny miafina ary omena fotsiny ny ENTER
2) Ny Geek be indrindra: Miaraka amin'ny WAN IP na Public IP: Ataovy ao anaty browser ny IP Public anao arahin'ny: 8080 EJ: 181.53.70.200:8080 Rehefa mangataka fanamarinana izy. amin'ny mpampiasa dia napetrany «admin» Ary nataony teny miafina hoe «Uq-4GIt3M» (Any Kolombia dia nohavaozin'izy ireo ny Firmware ary tsy mandeha intsony io safidy io, fa tsy mandany vola akory raha andramana) Zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa ny WAN IP anay dia tsy maintsy ampidirina avy amin'ny proxy na tambajotra hafa fa tsy anao.
3) Ilay iray mamaritra: Ao ambadiky ny router dia misy ilay "reset" malaza, mitadiava zavatra izay ahafahanao manindry azy ary avelao ho voahidy mandritra ny 4 na 5 segondra izy. Avy eo (Haingana be) Mandeha amin'ny solosain'izy ireo izy ireo ary miditra amin'ny router. Raha te hiditra azy dia ampiasao ilay dingana 1 «Ny fototra» Ary alohan'ny famaranana ny jiro rehetra amin'ny router dia manova ny teny miafiny izy ireo. Ary manomboka eo dia avelany ho banga ny solonanarana, miaraka amin'ny tenimiafina nampiasain'izy ireo.
Manantena aho fa hanampy anao betsaka izany, izaho dia iray amin'ireo fameperana fanoherana ny ISP.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ampidiro ny fanaingoana ny router Cisco DPC2425
Hilazako ny mpampianatra ahy ao amin'ny Cisco mba hahita izay eritreretiny xD
Te hiditra amin'ny fidirana dlink aho satria tsy manana teny miafina ary izay mandalo eo alohan'ny tranoko dia afaka mifandray maimaimpoana ary tsy misaotra ahy XD
Salama, rahampitso tolak'andro, manana olana amin'ny maodely tariby cisco dpc 2425 aho, nomen'izy ireo ahy ny nomeraon-telefaona ary voamarina isaky ny mandeha izany, mba hiasa indray izy io mba hahazoako feo fa tsy maintsy mijanona amin'ny ankehitriny aho ary mampifandray azy indray ary miandry mihantona indray ary eto dia manome ahy feo izy, manantena aho fa misy afaka manampy ahy
Ity dia efa olana amin'ny router na amin'ny zotra, mety misy fahatapahana ianao. Tokony hiantso fanampiana ara-teknika ISP ianao ho fanampiana amin'izany.
Une dia nametraka Internet sy telefaona ho ahy miaraka amin'ilay modem an'ny Cisco. Hita fa te hanova ny bokotra hotspot Wi-Fi aho ary hanamboatra ny safidin'ny encryption sy ny tanjaky ny signal.
Raha averiko amin'ny alàlan'ny bokotra ilay modem, mety hisy ve ny fanamboarana ny nomeraon-telefaona na zavatra manan-danja?
Salama, raha manontany ianao hoe manana an'ity router ity aho ary manana ny telefaona sy ny Internet, raha mamerina ny router aho dia tsy ho very ireo serivisy ireo. Tsy fantatro raha azoko tsara izany saingy nitranga tamiko izany rehefa niverina aho, niverina tany amin'ny orinasa daholo ny zava-drehetra ary tsy nanana fidirana Internet na telephony aho. Ny fanontaniako dia raha averiko indray ilay modem, tsy misy voalamina daholo na iray aza? MISAOTRA
MISAOTRA TSARA TSARA